के हो ? इन्टेल कोर आई ३, आई ५ र आई ७ ! – Sodhpatra
के हो ? इन्टेल कोर आई ३, आई ५ र आई ७ !
प्रकाशित : १६ फाल्गुन २०७७, आईतवार २२:४३ February 28, 2021
इन्टेल धेरैलाई मन पर्छ । कम्पनीले बनाउने प्रडक्ट एकदमै कूल हुन्छन् । तर प्रडक्टको नाम सहितको स्किम भने एकदमै दुविधाजनक हुन्छ ।
जस्तै कोर आई थ्री, कोर आई फाइभ, कोर आई सेभेन । कोर आई सेभेन ४९७ जीके के होला भन्ने प्रश्न तपाईंको मनमा पनि आइरहेको हुनसक्छ । यी झन्झटिला नामहरुले के अर्थ बोक्छन् त ? यी कुरा थाहा पाउनुअघि एउटा सामान्य व्यक्तिले सोच्न सक्छ कि किन कुनै प्रोसेसरका लागि छुट्टै प्रडक्ट नाम आवश्यक छ त ? त्यसमा कति गिगाहर्ज रन भइरहेको छ भन्ने विवरण मात्र लेबलिङ गर्दा हुन्न र ?
उदाहरणको लागि जब पेन्टियम फोर सार्वजनिक भयो तब त्यही मोडलसँगै समानान्तर क्षमता भएको पेन्टियम थ्री पनि हामीले देख्न पायौं । पेन्टियम थ्री अझ धेरै छिटो थियो । किनभने यसले प्रत्येक साइकलमा पेन्टियम फोरको तुलनामा धेरै काम गर्न सक्थ्यो । तर ग्राहकको रुपमा उच्च अङ्क भएको प्रडक्ट राम्रो होला भन्ने अपेक्षा हामी गर्छौं । समस्या त्यसैमा छ ।
किनभने सबै मेगाहर्ज र गिगाहर्ज समान रुपमा बनाइएका हुँदैनन् । त्यसैले कोरको पर्फमेन्सको आधारमा प्रडक्टलाई रेटिङ गर्न मिल्दैन । एउटा प्रोसेसर कत्तिको फास्ट छ भन्ने कुराको लागि त्यो वास्तविक आधार वा संकेत होइन । तर प्रोसेसरको इफिसियन्सीलाई मापन गर्न रेटिङ पनि सम्भव भएको छ । ग्राफिक्स तथा प्रोसेसर निर्माणकर्ता कम्पनी एएमडीले सन् २००० को सुरुवातमा आफ्नो पर्फमेन्स नेमिङ रेटिङ स्किम ल्यायो ।
एएमडीले आफ्नो प्रोसेसरलाई चार अङ्कको मोडल नम्बर प्रदान गर्न थाल्यो । जसलाई एएमडीले क्लक स्पिडको इन्टेल सीपीयूको तुलनामा जति पर्फमेन्स डेलिभर गर्दथ्यो, त्यसैको आधारमा प्रदान गर्न थाल्यो । तर यसले केही फरक परिवर्तन ल्याउन सकेन । ती सबै अझै पनि आफ्नो क्लक स्पिडको आधारमा अप्रत्यक्षरुपमा नामाकरण गरिएका थिए । यो कुरा इन्टेलले आफ्नो कोर सिरिजलाई सार्वजनिक गर्नु अगाडिको हो ।
सीपीयूको एउटा लाइनअपले न्युन क्लकमा काम गरिरहेका आफ्ना पूर्ववर्ती मोडललाई नाटकीय ढङ्गबाट उछिनेर गयो । त्यसपछि उसले मेगाहर्जको प्रतिस्पर्धालाई पनि त्यागिदियो । किनभने इन्टेल आफ्नो मार्केटिङलाई फ्रिक्वेन्सीबाट सिफ्ट गर्न चाहन्थ्यो । यसैको परिणामस्वरुप आज हामीहरुसँग यी मोडेल नम्बरहरु छन् ।
कोर आइ थ्री एउटा आधारभूत अप्सन हो । यसमा दुई वटा प्रोसेसिङ कोर छन्, जुन हाईपर थ्रेडिङ हुन्छन् । राम्रो मल्टी टास्किङका लागि यसमा सानो क्यास छ । यसले थोरै मात्र ऊर्जा खपत गर्दछ ।
यो कोर आई फाइभभन्दा न्यून गुणस्तरको छ र मूल्य पनि सस्तो हुन्छ । त्यसैले हामी धेरैले कोर आई फाइभ नै मन पराउँछौं । सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा आई थ्रीमा दुईवटा कोर छन् भने आई फाइभमा चारवटा कोर छन् । कोरको संख्या सामान्यतया सधैं त्यसको मोडल नम्बर भन्दा एक अंकले कम हुन्छ ।
उदाहरणका लागि आइ थ्रीमा दुई वटा कोर हुन्छन्, आई फाइभमा चार र आई सेभेनमा छ वटा कोर हुन्छन् । तर यो शुत्र सधैं भने लागु हुँदैन । किनभने मोबाइल कोर आई फाइभ एसमा दुईवटा कोर र एउटा हाइपर थ्रेडिङ हुन्छ । अधिकांश डेस्कटपमा चारवटा कोर र शून्य हाईपर थ्रेडिङ हुन्छ ।
तर यी सबैमा समान हुने भनेको सुधारिएको अनबोर्ड ग्राफिक्स र टर्बो बुस्ट हो । सिस्टममा धेरै भार हुँदा अस्थायी पर्फमेन्स बृद्धिका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ । सिस्टममा भारको कुरा गर्दा कोर आई सेभेन एस दिमागमा आउँछ । सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको सबै कोर आई सेभेन एसमा हाईपर थ्रेडिङ हुन्छ । ता कि त्यसले भारी कामको बोझ उठाउन सकोस् ।
कोर आई सेभेन दुई प्रोसेसिङ कोरको सहयोगमा जहाँसुकैबाट रन गर्न सक्छ । यसले दुईदेखि आठ स्टिक्स मेमोरी हुँदै जताबाट पनि सपोर्ट गर्न सक्छ । साथै यसमा दश वाटदेखि १३० वाटसम्मको थर्मल डिजाइन पावर अर्थात् टीडीपी पाउन सकिन्छ । यसमा धेरै प्रकार (भेराइटी) पाउन सकिन्छ ।
यसको पछाडि पनि एउटा कारण छ । लोअर टायर प्रोसेसरको तुलनामा कोर आई सेभेन एसमा धेरै क्यास, तीव्र टर्बो बूस्ट र राम्रो अनबोर्ड ग्राफिक्स हुन्छ । यसैगरी कोर आई सेभेन भनेको इन्टेलले बनाएको अहिलेसम्मको उत्कृष्ट प्रोसेसर हो । तर यसमा एउटा बेफाइदा पनि छ । त्यो भनेको यो धेरै नै महङ्गो छ ।
वास्तवमा यी प्रोसेसरको मोडेल नम्बरले देखाउने कुरा भनेकै यहि राम्रो, धेरै राम्रो र उत्कृष्ट बीचको सेग्मेन्ट मात्र हो । त्यसबाहेक यी नम्बरहरुको कुनै अर्थ छैन ।
त्यसैले यदि तपाईं ल्यापटप, डेस्कटप खरिद गर्दै हुनुहुन्छ र भने त्यसका फिचर हेर्नुहोस् । कोरको संख्या, सीपीयूको क्लक स्पिडहरु हेर्नुहोस् । जब तपाईंले एउटै ब्राण्डभित्रको एउटै प्रडक्ट जेनेरेसनभित्र तुलना गर्नुहुन्छ, त्यसबाट आउने मेट्रिक्सले तपाईलाई धेरै अर्थ दिन सक्छ । -टेक पानाबाट